Myanmar Model Photos : Hot Model Girl with Perfect Body Structure ~ Cute Burmese Girls, Models and Actress Photos Collection!
Myanmar Model Photos : Hot Model Girl with Perfect Body Structure
She is one of the Myanmar beautiful new face model girl. She is showing off her perfect body curve. We can not make sure what her name is. If anybody know her name, Please write in the comment box. Thanks.သူကတော့ မြန်မာ မော်ဒယ် အသစ်ကလေးပါ။ နာမည်တော့ အတိအကျ မသိပါဘူး .. စွဲဆောင်မှုရှိပြီး လှပတဲ့ မော်ဒယ်အသစ်ကလေး ပါ.. နာမည် သိတဲ့သူများ ရှိရင် Comment မှာ ရေးပေး ခဲ့ပါ.. ကျေးဇူး....(Photos From Domeno@MMCP)
New Faced Model
gostriderAugust 25, 2009 at 9:07 AMစောက်ကောင်မ နင်ကမော်ဒယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်လားအင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ဘူးလားအမေပေးတဲ့လယ်တစ်ကွက်ကိုပြမှ မော်ဒယ်ထင်လားနင်တို့က စောက်ရှက်ကို မရှိတော့ဘူးလားနင်တို့ စောက်ဖုတ်ကိုနင်တို့ တန်ဖိုးထားမှ သူများကတန်ဖိုးထားမှာပေါ့ReplyDeletegostriderAugust 25, 2009 at 9:10 AMနင်တို့ စောက်ဖုတ်ထဲကို လီးတစ်ချောင်းသွင်းဖို့ဒီလောက်တောင် ပြရလား...ငါ အလကားလုပ်ပေးမယ်...မျိုးဖျက်မတွေReplyDeleteaAugust 26, 2009 at 9:17 AMThis comment has been removed by the author.ReplyDeleteaungnantheitAugust 29, 2009 at 10:31 PMအလှတရား ကို ခံစားမှု အရ အမျိုးပေါင်းများစွာ ခွဲခြားတဲ့ အထဲက ရင်ကို မြင်ရုံနဲ့ ပူလောင်စေတဲ့ ပူလောင်တဲ့ အလှတရားတွေကိုတော့ မလုပ်ပြကြပါနဲ့လို့တော့တောင်းပန်ပါတယ်... ကိုယ့်ယဉ်ကျေးမှုကို ကိုယ်တွေမှ မထိန်းရင်တော့ ပျက်ပြယ်ပြောက်ကွယ်သွားလိမ့်မယ်နော်...ReplyDeleteAnonymousAugust 30, 2009 at 3:06 AMsout shat ma shi tar .. you "gostrider"..u don't need to say rudely.. if ur anus is big enough, u can accept what u call "lee"ReplyDeleteAnonymousApril 20, 2010 at 8:26 AMလက်တဘက်နဲ.နို.ကိုင်ညှပ်၊အခြားတစ်ဖက်နဲ.ခါးဖက်လောလိုက်ရင်တော်တော်ကောင်းမှာပဲနော်။လောချင်လိုက်တာ။ ပုံတွေ.တာနဲ.အလိုလိုလီးကထနေပြီ။ ခွင်.ရမယ်ဆိုပြောပြနော်။ တန်ရာတန်ကြေးတော.ပေးရမှာပေါ.နော်။ReplyDeleteနတ်ဆိုးApril 29, 2010 at 11:59 AMဘယ်သူ မပြု မိမိ မှု.တဲ.။စကားပုံရှိတယ် ကြားဖူးလား မ သိ။အမိ............နုတ်ကြမ်းတယ်၊အဖ............ရုတ်ကြမ်းတယ် တဲ.။ReplyDeletejamesNovember 12, 2011 at 5:37 AMကိုယ်. မြန်မာမော်ဒယ် မိန်း ကလေး ပဲ ဗျာ. ဒီလိုမ ပြော ကြ ပါနဲ.ReplyDeletenolianmawiFebruary 10, 2012 at 9:19 AMသနားစရာလေးတွေပဲနော်ReplyDeleteakApril 20, 2012 at 9:57 PMgostrider said... စောက်ကောင်မ နင်ကမော်ဒယ်ဆိုတဲ့စကားကိုနားလည်လား အင်္ဂလိပ်စာ မတတ်ဘူးလား အမေပေးတဲ့လယ်တစ်ကွက်ကိုပြမှ မော်ဒယ်ထင်လား နင်တို့က စောက်ရှက်ကို မရှိတော့ဘူးလား နင်တို့ စောက်ဖုတ်ကိုနင်တို့ တန်ဖိုးထားမှ သူများကတန်ဖိုးထားမှာပေါ့အကောင်းဆုံးက အစိမ်းစားတာ အသင့်တော်ဆုံးပါ ။ReplyDeleteakApril 21, 2012 at 3:19 AMအပျိုစစ်စစ်ရော လူပျိုစစ်စစ်ပါ Virgin လို့ဘဲ ခေါ်တယ်။ အဓိပ္ပါယ် ဖွင့်တာ မတူကြပါ။ အများစုကတော့ “မိန်းကလေး တယောက် သူ့ဘ၀မှာ ပဌမဆုံးအကြိမ် မိန်းမအင်္ဂါ (ဗဂျိုင်းနား) ထဲကို ကျားအင်္ဂါ (လိင်တံ) ထိုးသွင်းပြီး၊ လိင်ဆက်ဆံတာ တွေ့ကြုံဘူးလိုက်တာနဲ့၊ အပျို မစစ်တော့ဘူး။” “ယောက်ျားလည်း အဲလို အတွေ့အကြုံရှိဘူးတာနဲ့ လူပျို မစစ်တော့ဘူး။” လို့ နားလည်၊ လက်ခံထားကြတယ်။ (လိင်တူ-ဆက်ဆံတာကို ဒီနေရာမှာ ချန်ထားပါရစေ။)ReplyDeleteAdd commentLoad more...